Cuntooyinka giraangiraha, cimilada jiilaalka iyo agabka loogu talagalay waayeelka - Cuntooyinka giraangiraha
Cuntada Taayirada, cimilada jiilaalka iyo ilaha waayeelka
- Sannadka cusub ayaa yimid oo wuxuu la yimid kulaylka Arctic. Inaad awood u yeelatid inaad xakameyso cimilo qabow, baraf iyo baraf waa qodob faan u ah dhammaanteena ku nool halkan, laakiin inta aan necebnahay inaan qiranno, Old Man Winter ayaa marmar farageliya xitaa qorshayaasha ugu fiican.
Mid kasta oo ka mid ah Cunnooyinkayaga ku saabsan barnaamijka barnaamijka 'Wheels' ayaa sameeya dadaalka ugu fiican ee lagu sii furnaan karo inta lagu jiro cimilada xun ee qaboobaha, laakiin mararka qaarkood waa mid aad khatar u ah in la diro iskaa wax u qabso ka baxsan wadada si aad cunto u keento. Haddii barnaamijyadeenna maxalliga ah lagu qasbo inay xirmaan cimilada darteed, waxaan hubin doonnaa inaan kula soo socodsiinno. Waxaad ku ogaan kartaa xiritaanka siyaabo dhowr ah:
Hubi websaydhkayaga, www.meals-on-wheels.com
Nagala soco Facebook iyo Twitter
Wac barnaamijka deegaankaaga ama naga soo wac 612-623-3363
Waxaa muhiim ah in la ogaado in tabaruceyaasheena ay awoodaan inay wax ku wada gaarsiiyaan dhammaan xaaladaha ugu xun mooyee. Helitaanka cuntooyinka waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay kuwa la kulma arrimaha dhaqdhaqaaqa, gaar ahaan xilliga qaboobaha. Haddii adiga ama qof aad jeceshahay aad ka faa'iideysan karto helitaanka cunnooyinka cusub, ee guryaha la geeyo, fadlan nagala soo xiriir 612-623-3363 ama iska qor khadka si aad u heshid cunto.
Kahor intuusan qabooladu bilaaban, waxaan diyaarinay in aan helno cunooyin shelf-deggan oo lasiiyo inbadan oo kamid ah macaamiisheena. Deyrtii hore, tabaruceyaashu waxay soo uruuriyeen in ka badan 5,200 oo raashin ah oo loo geeyey macaamiisha si ay u isticmaalaan marka darawalladu aysan ka bixi karin waddada iyada oo qayb ka ah sannadle ah Blizzard Box Blitz dhacdo. Sanduuq kasta wuxuu kaloo ka koobnaa macluumaad iyo ilo loogu talagalay macaamiisha oo waxtar u yeelan kara xilliga qaboobaha daran.
Halkan waxaa ku yaal xoogaa ilo dheeri ah oo waayeelka iyo daryeelayaashu ay ku heli karaan caawimaad xilliga qaboobaha:
The Homeland Security iyo Maareynta Degdegga ah bogga kheyraadka cimilada jiilaalka.
Ku Ku noolaanshaha bogga Kheyraadka Shabakadda Guriga ee loogu talagalay barnaamijyada daryeelka guriga iyo adeegyada shaqada ee waayeelka. Waxa kale oo aad ka heli kartaa ilo khaas u ah xaafaddaada adoo wacaya 1-800-320-1707.
Adeegyada majarafadaha barafka sida ay abaabuleen MinnesotaHelp.info. Waxa kale oo aad wici kartaa khadka Senior LinkAge si aad uga hesho adeegyadan iyo adeegyadan kale ee xaafaddaada ah: 1-800-333-2433.
Fadlan tixgeli inaad iska xaadiriso waayeelka iyo dadka naafada ah ee xaafaddaada inta lagu jiro cimilada xun. Kuwa leh arrimaha dhaqdhaqaaqa waxaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaatooyin isku dhafan oo ku saabsan helitaanka waxyaabaha ay u baahan yihiin markii aan dhammaanteen dhib ku qabno inaan ka wareegno.
Janaayo 3, 2014